Soo dejisan Puffin Web Browser Free 4.6.0.2036 – Vessoft
Soo dejisan Puffin Web Browser Free
Puffin Web Browser Free – browser shaqaynaysa in ay taageertaa teknoolajiyada casriga ah. Waxyaabaha ugu weyn ee software-ka waa taageero ah Adobe Flash technology si aad u eegto a video xubno, multimedia ama version full of websites. Puffin Web Browser Free bixisaa xawaaraha sare ee loading of pages ay sabab u tahay daruur technology riixo nuxurka iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad badbaadin bandwidth. Software wuxuu suuragelinayaa in ay isticmaalaan browser ee si qarsoodi ah oo aan badbaadin taariikhda websites daawan. Sidoo kale Puffin Web Browser Free sir gaadiidka si ay u difaacaan saamayn dibadeed iyo taageertaa kaydinta daruurtii.
Loading Fast of pages
Support of Adobe Flash technology
La shaqaynta kaydinta daruurta
Puffin Web Browser Free Software la xiriira: